यशैया 27 ERV-NE - त्यस समयमा - Bible Gateway
यशैया 26यशैया 28
यशैया 27 Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)
27 त्यस समयमा परमप्रभुले लिब्यातानको न्याए गर्नु हुनेछ।
लिब्यातान एउटा अधर्मी सर्प जस्तै हो,
जसमाथि परमप्रभुले आफ्नो विशाल तरवार चलाउनु हुनेछ।
उहाँले आफ्नो शक्तिशाली तरवारद्वारा, सर्प लिब्यातानलाई दण्ड दिनु हुनेछ।
परमप्रभुले समुद्रको ठूलो राक्षसलाई मार्नुहुनेछ।
2 त्यसबेला, मानिसहरूले,
आनन्दित दाखको बोटको गीत गाउनेछन्।
3 “म, परमप्रभु, त्यस बगैंचाको देखरेख गर्नेछु।
म ठीक समयमा त्यसमा पानी लगाउनेछु
म राति र दिनमा बराबर त्यसलाई पहरा दिनेछु,
कसैले पनि त्यस बगैंचालाई नाश गर्ने छैन।
4 म रिसाएको होइन्।
तर त्यहाँ युद्ध भएको भए र कसैले काँडादार पर्खालहरू बनाए ता पनि,
म त्यसमाथि हिंड्दै त्यसलाई बालिदिन्थे।
5 तर यदि कोही मानिस रक्षाको निम्ति मकहाँ आउँदछ भने
र मबाट शान्ति चाहन्छ भने,
तब उसलाई आउन देऊ, अनि मबाट शान्ति पाओस्।
6 त्यस समयमा याकूब राम्रो जरा भएको बलियो रूख जस्तो हुनेछ।
तब मिश्र बढ़न र फूल्न लागेको बोट जस्तै हुनेछ।
त्यसपछि यो धर्ती इस्राएलका नानीहरूले फलहरूले बोट भरिएको जस्तै हुनेछ।”
परमेश्वरले इस्राएललाई टाढा पठाउनु हुनेछ
7 परमप्रभुले आफ्ना मानिसहरूलाई कसरी दण्ड दिनु हुनेछ? बितेका दिनहरूमा शत्रुहरूले मानिसहरूलाई सताए। के त्यसरी नै परमप्रभुले पनि सताउनु हुन्छ? विगतमा, धेरै मानिसहरू मारिए। के परमप्रभुले पनि त्यसै गर्नु हुन्छ र सबै मानिसहरूलाई मार्नु हुन्छ?
8 परमप्रभुले इस्राएललाई टाढा पठाएर आफ्नो तर्कलाई साम्य पार्नुहुनेछ। परमप्रभु इस्राएलसित कर्कश शब्दमा बोल्नु हुनेछ। उहाँका शब्दहरूले मरुभूमिनको तातो हावाले जस्तै पोल्नेछ।
9 याकूबको दोष कसरी क्षमा गरिने? उसका पापहरू कसरी हटाइने? ती कुराहरू हुने नै हो चट्टानको वेदी धूलो परिनेछ। झूटा देवताहरूलाई मूर्तिहरू र वेदीहरू पुज्ने नष्ट हुनेछन्।
10 त्यस समय, महान शहर रित्तो हुनेछ, त्यो मरुभूमि जस्तो हुनेछ। सारा मानिसहरू गइसकेका हुनेछन्। तिनीहरू भाग्ने छन्। शहर एक खुल्ला चउर जस्तो हुनेछ। गाई-वस्तुहरूले त्यहाँ खानेछन्। गाई-वस्तुहरूले दाखका हागाँहरूबाट पातहरू खानेछन्। 11 दाखहरू सुक्नेछन् अनि हागाँहरू भाँचिएर जाने छन्। स्त्रीहरूले ती हागाँ दाउरा बाल्ने छन्।
मानिसहरूले बुझ्नलाई अस्वीकार गर्ने छन्। यसर्थ परमेश्वर, सृष्टिकर्ताले तिनीहरूलाई आराम दिनु हुनेछैन। तिनीहरूका सृष्टिकर्ता तिनीहरू प्रति कृपालु हुनु हुनेछैन।
12 त्यसबेला परमप्रभुले आफ्ना मानिसहरूलाई अरूहरूबाट अलग गर्नुहुनेछ। उहाँले यूफ्रेटिस नदीमा शुरू गर्नु हुनेछ। परमप्रभुले आफ्ना मानिसहरूलाई यूफ्रेटिस नदीबाट मिश्रको नदीमा जम्मा गर्नुहुनेछ।
तिमीहरू इस्राएलका मानिसहरू एक, एक गर्दै त्यहाँ भेला हुने छौ। 13 मेरा धेरै मनिसहरू अश्शूरमा हराएका छन्। कतिपय मेरा मानिसहरू मिश्रबाट भागेका छन्। तर त्यही बेला, महान तुरही फुकिने छ। अनि ती सारा मानिसहरू यरूशलेममा फर्किने छ। ती मानिसहरूले त्यो पवित्र पर्वतमा आएर परमप्रभुको सामु घुँडा टेकेर झुक्ने छन्।